ဖိုးကံထူး၏ကိုယ်ပိုင်နေရာ - ☺☺☺ဗုဒ္ဓကမ္ဘာ☺☺☺
ဘိုတော် မယ်တော် ဘွားတော် သေလျှင် ဘယ်သွားမှာလဲသေသေချာချာ မသိလို့ပါ ခတ်စကားနဲ့မေးကြည့်တာပါ လူးဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
Started this discussion. Last reply by လင်းကိုကို မေ 16, 2013. 10 Replies0Likes
မြတ်စွာဘုရား သည် ပါရမီ၁၀ပါးဖြည့်ဆည်းခဲ့လို့ ဘုရားအဖြစ်သို့ရောက်ရှိတာလားသစ္စာ၎ပါးဆိုက်လို့ ဘုရားဖြစ်သို့ရောက်ရှိတာလားထောက်ပြဆုံးမပြီးလမ်းပြပေးကြပါဖိုးကံထူးဆက်လက်ဖတ်ရူရန်.........
"Naynayအပြစ်​မဖြစ်​နိုင်​ပါဘူး ကျုယ်​ကတကယ်​​မေတ္တ္တ္တာထားနိုင်​ဖို့ပဲရှိတယ်​ယူနိုင်​ပါတယ်​ တဝမ်းကွဲ​တောင်​ယူကြပါတယ်​ကို့ဖက်​ကစိတ်​ရှင်းဖို့ပဲလိုတာပါ"
"သာဓုပါခင်​ဖျ အလည်​မ​ရောက်​တာကြာလို့အ​ကောင့်​​တောင်​​မေ့​နေပီ မဂ်​လာ​ပေါင်းနှင့်​ပြည့်​စုံပီးလိုအင်​ဆန်​ဒတလုံးတဝကြီးပြည်​စုံလို့သူ​တော်​​ကောင်းများဖြစ်​ကြလျှက်​ သာသနာအကျိုးထမ်းရွက်​နိုင်​တဲ့လူ​တော်​​လေးများဖြစ်​ကြပါ၏.ကျ​နော်​မပါ"
ဖိုးကံထူး replied to Sai Lao Kham's discussion 'မည်သည့်အခါ သာသနာတော် ကွယ်ရပါသလဲ။'
"မိုးကုတ်ဆရာတော်ဘုရားကြီးက ၀ိပဿနာဘယ်အချိန်မှာပေါသလဲသာသနာတွင်းမှာပေါ်တယ်လို့မှတ်ရမယ် ကျနော်တို့ ဘယ်အချိန်လူလာမြှောက်လာတာလဲ သာသနာတွင်းမှာလူလားမြှောက်တယ်သာသနာတွင်း နဲ့လဲကြုံတယ် ဟောတက်တက်ဆရာတွေနဲ့လဲကြုံတယ် ထောင်တက်တဲ့နားလဲပါတယ် ပါရမီပြည့်ပြီ…"
ဖိုးကံထူး သည်thein wai's ၏ 'တဏှာ၏ အထင်မှား အမြင်မှား။' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဖိုးကံထူး သည်♣တောသူမလေး♣'s ၏ 'မောဟဘုံလား မီးတွင်းသား အသွားခက်လှသည်' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဖိုးကံထူး သည်လှိုင်ကျော်ထွေး's ၏ 'ပါရမီဘက် မငဲ့လိုက်ကြပါနဲ့' ဘလော့ ကို နှစ်သက်ခဲ့ပါသည်။
ဖိုးကံထူး အိမ်ကလေးသည် မြတ်စွာဘုရား၏ မေတ္တာရိပ်အောက်တွင် တည်ရှိပါသောကြောင့် ရောက်လာသူအားလုံး စိတ်၏ချမ်းသာခြင်း ကိုယ်၏ကျမ္မာခြင်းနှင့် ပြည်စုံကြပါစေ
ဗုဒ္ဓံ သရဏံဂစ္ဆာမိ ဓမ္မံ သရဏံဂစ္ဆာမိ သံဃံ သရဏံဂစ္ဆာမိ
မြတ်စွာဘုရား ပဉ္စ၀ဂ္ဂီငါးဦးအား တရားဦးဟောပုံ
http://api.ning.com/files/DOkbxCt1yiN0EQTqJsDaOM5mCnP-JcN10t-ULoAhF2i2*ykmFBnpAKXebhCRZ8GNkRyy9GK0biHo-O0wWzvrW*swtX7ck1wy/Bondaw6par.swf/" /> http://api.ning.com/files/DOkbxCt1yiN0EQTqJsDaOM5mCnP-JcN10t-ULoAhF2i2*ykmFBnpAKXebhCRZ8GNkRyy9GK0biHo-O0wWzvrW*swtX7ck1wy/Bondaw6par.swf/" wmode="opaque" quality="high" allowscriptaccess="never" />
မြတ်စွာဘုရား မာရ်နတ်ကို အောင်မြင်တော်မူပုံ
2:00am အချိန်မေ 28, 2014, တွင် ခင်လေး မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
1:51pm အချိန်မေ 10, 2014, တွင် ကလေးတို.ဆရာမ မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။
ဆရာမတို.ကတေ့ာ ဗုဒဘာသာ သာသနာတော်ကို
ငယ်စဉ်ကတည်းက လေးလေးနက်နက် ယုံကြည်-လိုက်စား
လာခဲ့တာမို. အဲဒီလို လူမျိုးတွေကိုလည်း စိတ်မဝင်စားဘူး-
“ဘယ်သူလဲဆိုတဲ့“ မေးခွန်းကိုလည်း အဖြေမပေးနိ်ုင်ဘူး-
ဒါ့ကြောင့် ကိုယ့်မေးခွန်းကို ကိုယ်တိုင်ပဲ ပြန်ဖြေလိုက်နော်-
3:57pm အချိန်ှဧပြီ 19, 2014, တွင် yupar aye မှတ်ချက်ရေးသွားပါသည်။